Baby Door Stoppers, Baby Safety mkpọchi, Baby Safety Kitchen - Oicozy
Baby Safety Door igbochi
Baby Other Safety Ihe
Anyị na-eche ihe ọma ngwaahịa na-abịa site na ezigbo imewe na ezi akara, nke mere na anyị mgbe niile na-etinye mma na akpa ebe na nditịm ahụ maka ngwaahịa mma nke ọ bụla usoro.
Ịgbanwe si OEM ka ODM, ugbu anyị na-esi ọnwụ na nke imewe na na-onwe ika, nke-eme ka anyị na-ahụ maka ngwaahịa na ahịa maka ogologo okwu.
Oicozy, enyemaka nke Ningbo Oboun, bụ otu ufọt ufọt sized emeputa na tumadi emebe ma na-egbo nchekwa ụzọ ámá maka nwa obibi ọzọ nchekwa ihe dị ka akpọchi na latches, wdg
Guzosie Ike na 2015, Ningbo Oicozy ugbu a na-aghọ na-otu pụrụ iche soplaya na ekspootu na tumadi obibi na imewe, ahịa na mmepụta maka nwa nchekwa ihe, n'ihi na ihe atụ ụzọ igbochi, nkuku n'echebe, nchekwa mkpọchi, na nchekwa ụzọ ámá na na.
Anyị na-dị na Ningbo, China na-adaba adaba njem ohere na ihe niile anyị na ngwaahịa ime na mba àgwà ụkpụrụ nke na-ukwuu ghọtara na dị iche iche na ahịa n'ụwa nile. Ezukọ ebe 2000 square mita noo, anyị ugbu a nwere ihe karịrị 80 ọrụ, kwa afọ ahịa ọnụ ọgụgụ na karịa USD3, 000.000 na-ugbu a exporting 90% nke anyị mmepụta n'ụwa nile ...